Ferguson, Frank Lampard & Rooney - Magacyada LIX Tababare Ee Everton Ay Midkood Magacaabayso Oo La Shaaciyey - GOOL24.NET
Ferguson, Frank Lampard & Rooney – Magacyada LIX Tababare Ee Everton Ay Midkood Magacaabayso Oo La Shaaciyey
Saacado kaddib markii ay Everton shaqada ka caydhisay tababaraheedii Rafa Benitez oo lix bilood oo kaliya xilka hayey, waxa soo baxaya magacyada macallimiinta cusub ee ay kooxdaasi u kala dooranayso beddelka Benitez.
Jamaahiirta Everton ayaa farxad kusoo dhoweeyey go’aanka shaqada lagaga caydhiyey sababtuna waa in ay ka dhex arkayaan Liverpool oo uu ugu qoran yahay buugga halyeeyada maadaama uu sannadkii 2005 u qaaday Champions League.
Siddeed jeer oo ay guul-darro kasoo hooyeen 11 ciyaarood oo horyaalka ah oo isku-xigay, ayna ugu dambaysay Norwich City oo Sabtidii ahayd, Everton ayaa gellinkii dambe ee maanta shaqada ka caydhisay Benitez, waxaana loo arkayaa inuu yahay go’aan waqti habboon yimid maadaama ay kooxdu ku jirto kaalinta 16aad oo 19 kulan oo ay dheeshay ay ka haysato 19 dhibcood oo kaliya.
Sida uu sheegay Alan Myers oo ka tirsan telefishanka Sky Sports, Wayne Rooney ayaa ku jira lix tababare oo la filayo in midkood uu noqdo macallinka cusub ee Everton.
Rooney ayaa waxa uu hadda tababare u yahay kooxda heerka labaad ee ganaaxyadu ku socdaan ee Derby County, taas oo ay haysato dhibaato dhaqaale xumo, dhowaana waxa laga jaray 21 dhibcood markii ay hoos uga dhacday heerka aan la ogolayn inay ka hoosayso miisaaniyadda kooxaha heerka labaad.
Waxa kale oo liiska ku jira tababaraha xulka qaranka Belgium ee Roberto Martinez oo hore usoo layliyey Everton ka hor intii aanu ciyaaraha caalamiga ah u wareegin. Waxa kale oo isaguna ku jira Duncan Ferguson oo weerakra uga ciyaari jiray kooxdan, isla markaana si ku-meelgaadh ah shaqada tababarenimo ee Everton u qabtay intii u dhaxaysay Marco Silva oo la caydhiyey iyo Carlo Ancelotti oo xagaagii iskaga tegay, kana degay Real Madrid.
Tababaraha kooxda Brighton ee Graham Potter ayaa si lama filaan ah isuguna uga soo dhex-muuqday liiska lixda tababare ee ay Everton kala xulanayso.
Frank Lampard oo aan wax shaqo ah qabanin tan iyo markii laga caydhiyey Chelsea sannad kahor iyo Rudi Guarcia oo soo layliyey kooxaha Lyon iyo Roma ayaa iyaguna ku jira liiska sida uu sheegay khabiirka ciyaaraha Paul Merson.